Sidee ayuu ku dhaqan galayaa go’aanka Maxkamadda ICJ ee kiiskii Soomaaliya iyo Kenya? | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Sidee ayuu ku dhaqan galayaa go’aanka Maxkamadda ICJ ee kiiskii Soomaaliya iyo Kenya?
Dr. Axmed Cali Khayre oo ah sharci yaqaan ayaa ka waraamay sida uu ku dhaqangeli karo go’aanka kasoo baxay maxkamadda marka loo fiiriyo xeerarka caalamiga.
Sidee ayuu ku dhaqan galayaa go’aanka Maxkamadda ICJ ee kiiskii Soomaaliya iyo Kenya? was last modified: October 13th, 2021 by Admin
Madaxweynaha Hirshabelle oo la filayo inuu soo saaro liiska xubnaha aqalka sare.